UPaul Rand Logos: ungubani, iimpawu kunye nolunye lwezicwangciso zakhe | Abadali be-Intanethi
Iilogo zikaPaul Rand
UNerea Morcillo | 12/04/2022 12:59 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Uyilo lwegraphic lukwakhuthaza, ulwazi kunye nokufunda. Ukuqonda ukuyila, kuyimfuneko ukujonga kwixesha elidlulileyo kwaye uphefumlelwe ngabo baphumelele impumelelo ngokusekelwe kwiminyaka kunye neminyaka yamava kwicandelo.
Yiyo loo nto uninzi lwabo lungakhange lufumane ukuwongwa kuphela ngomzamo kunye nonyamezelo lwabo, kodwa nakwiiprojekthi ezininzi ezithe, ngokuhamba kwexesha, zaba yinxalenye yeempawu kunye nezazisi zeenkampani ezininzi esizaziyo namhlanje.
Kodwa ukuthetha ngoyilo, Okokuqala kufuneka sikhankanye umzobo othathwa njengoyise woyilo kunye nobugcisa begraphic, uPaul Rand. Kule post, asizukuxelela nje ibali lakhe njengomyili, kodwa siza kukubonelela ngothotho lweeprojekthi ezimenze waba luphawu lwabayili abaninzi.
1 UPaul Rand: Ngubani na?
2 imisebenzi yakhe emihle
3 Ezinye iimbekiselo
3.1 USawule Bass
3.2 UMilton Glaser
3.3 UDavid Carson
UPaul Rand: Ngubani na?
Paul irandi Ichazwa njengenye yemiboniso ephezulu yoyilo lwegraphic. Waziwa njengoyena mzobi ubalaseleyo kulo lonke ixesha. Wazalelwa eUnited States, kwaye ukongeza kuyilo oluphambili njengesebe lakhe eliphambili, waziwa ngokuba ngumzobi, umhlohli, umyili wemizi-mveliso kunye negcisa lezentengiso.
Ukwaluphawu lokuba ngumdali weSikolo saseNew York kunye nomsebenzi wakhe omkhokelele kwimpumelelo yehlabathi. Ngamafutshane, ungumyili owaphefumlelwa ubugcisa begraphic njengendlela yobomi, kwaye Okwangoku, kukho amagcisa amaninzi, abayili kunye nabayili abavela kwihlabathi liphela abayithatha njengesalathiso seeprojekthi zabo, ngakumbi ezo zezazisi zenkampani.
Wazalelwa eBrooklyn ngowe-1914, kwintsapho yakhe wayegqalwa njengokhethekileyo ngenxa yokuba wayeluthanda gqitha unqulo, yamaYuda namaOthodoki, nto leyo eyakhokelela ekuthintelweni nasekuvalweni kwemifanekiso. Kodwa wayefuna ukubalasela kwenye into engeyiyo inzululwazi okanye iileta, ngoko ukususela esemncinane waqalisa ukuyila iipowusta zezinye zeziganeko zesikolo sakhe. Leyo yindlela awabavumela ngayo abazali bakhe ukuba afunde aze aqhube izifundo zakhe kwezobugcisa.
Ukususela esemncinane wayesele egqamile njengomyili nomzobi, ekubeni amanye amaphephancwadi awaziwayo kwisixeko sakhe amthuma ngeeprojekthi ezinkulu zokuyila amaqweqwe awo. Yileyo ndlela uPaul Rand akhula ngayo kwaye ekhudlwana kwaye yenza i-niche ebalulekileyo kwihlabathi loyiloKakhulu, kangangokuba bayibhala njengeyona mpembelelo inkulu kuyilo lwaseMelika.
Kwiminyaka kamva, iinkampani ezininzi zazifuna ukunxibelelana naye ukuze ziphucule indlela ezibhengezwa ngayo iinkampani zazo. Ngesi sizathu, Wagqiba ekubeni athathe indlela entsha kwaye azinikele kuyilo lophawu. Ukwenza oku, wasebenzisa ezinye iimilo zejometri apho waphefumlelwa khona kwiiprojekthi zakhe zeempawu kwaye wazibeka phezulu ngenjongo yokudala uphawu olucocekileyo, olungaxakeki kakhulu kwaye kulula ukuchonga. Le yindlela ezinye iinkampani ezichaza ngayo uPaul Rand.
imisebenzi yakhe emihle
Ukuba uPaul Rand umele into ethile, ikuyilo lophawu. Ngesi sizathu, uHenry Ford wakhetha uPaul Rand njengomyili ophambili nangona wayengafuni ukuba ayiyile. Ukwenza oku, umyili ukhethe uyilo olusebenzayo kunye noluqhelekileyo lwelo xesha, masikhumbule ukuba uphawu kunye noyilo lwayo lubekwe ngakumbi kwi-70s, ixesha lokutshajwa kwakhona ngeentshukumo ezinkulu zemoto kunye nobuchwepheshe.
Yile ndlela uPaul Rand waba yinto efanelekileyo ngakumbi kwimbali yoyilo, kuba wayeyinxalenye yeenkampani ezinkulu zeemoto kwimbali, ngelo xesha yahlelwa njengeyona ibalulekileyo.
UPaul Rand naye wayeyinxalenye yoyilo lwento ekhoyo ngoku neyaziwayo njengenkampani yeteknoloji yezizwe ngezizwe yaseMelika kunye nokubonisana okusekelwe eArmonk, eNew York. Ngaphandle kwamathandabuzo, uyilo lusebenza kakhulu. Igcina umgca wayo womzobo kunye nesimbo sayo sejometri kunye neemilo eziqhelekileyo nezilula.
Ukwenziwa kolu phawu kunye nokusetyenziswa kombala wayo wenkampani kwaba yimpumelelo kwinkampani nakwikhondo lomsebenzi wakhe wokuba ngumzobi kunye nomyili wophawu.
IWestinghouse yinkampani yombane yasePennsylvania. Le nkampani iphinde yakhetha kwaye yafumana isidingo sokwenza uphawu. Ukwenza oku, uPaul Rand wehla waya emsebenzini kwaye, ukugcina ubuhle bayo be-constructivist kunye neemilo zejometri, wagqiba ekubeni aqulunqe ilogo enomfanekiso wayo omelwe yi-initial yenkampani enemilo enjengezangqa okanye iisilinda.
Yayiyenye yeelogo ezifumene ukuqondwa okukhulu kushishino loyilo kwaye namhlanje yenye yeelogo ezimele kakhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, omnye wemisebenzi yakhe ebalaseleyo apho umsebenzi owenziwe kakuhle ubonakala.
Uthungelwano lukamabonakude oludumileyo lwakwa-ABC lwaluyenye yeebrendi kunye neenkampani ezazidinga isazisi esitsha. Ngesi sizathu, uPaul Rand wajoyina enye i-adventure entsha. Ngeli xesha wakhetha uhlobo olungqukuva olungayihoyiyo i-fluidity kunye nobushushu bobume bejometri. Ngaphandle koku, ukhethe isangqa esakhiwe ngokugqibeleleyo nesiyilwe kwaye wasisebenzisa njengeyona nto iphambili yelogo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, lolunye lolona yilo lubalaseleyo lomsebenzi wakhe njengomyili.
Ukuba bekufuneka siqale olu luhlu kunye nabanye ababhekiseli abaye benza imbali, bekuya kuba nguSaul Bass ngaphandle kokungabaza. Ungumyili wepowusta ophefumlelwe yi-cinema yaseHollywood nakwiinkwenkwezi ezinkulu. Wayengumguquli kwishishini lefilimu, eyila ezinye zeekhredithi zefilimu. Isebenza njengeNdoda ephethe uMpu weGolide, "Isilingo sihlala phezulu", "i-Vertigo", "i-Anatomy of a Murder", "iBali elisecaleni lasentshona", "Psychosis" okanye "i-Spartacus" igqame. Ngamafutshane, umyili ophembelele abenzi befilimu abakhulu kunye namagcisa.
Ungomnye wabayili kunye namagcisa awaziwa kwihlabathi jikelele ngokuyila kwakhe. Ube ngumyili welogo edumileyo yesixeko saseNew York ukuba abakhenkethi abaninzi banxiba izikipa zabo xa betyelele esixekweni. Ukwaziwa ngokumelwa kwakhe uBob Marley, ngaloo ndlela eyila kwaye enze umzekeliso ogcwele imibala kunye neendlela ezahlukeneyo kakhulu. Ungomnye wabaqulunqi obonakaliswe ngokusetyenziswa kwemibala ecacileyo kunye neyothusayo yemibala. Ukuba le nto uyifunayo yinkuthazo, yenye yeembekiselo ezinkulu zokuyenza ngaphandle kokuthandabuza.
Unguyise woyilo lwegrunge, obunye ubuchule bokuyila imizobo. Isitayile sakhe siphawulwa ngokugcwala kakhulu iipateni, iipateni ezivela kwiifonti ezingaqhelekanga kwaye zinomtsalane, imibala kunye noluhlu lwechromatic edlamkileyo kwaye. indlela yokuqulunqa kunye nokwahlula izinto zegraphic azisebenzisa ngendlela ehonjiswe kakhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, sesinye sezona zalathiso zibalaseleyo kwabo baqalayo kwaye bafuna ukongezwa kokuyila kunye nenkuthazo. Ukongeza, udume nangeminye yemisebenzi yakhe, efana neentengiso zeempawu ezifana nePepsi, Budweisser okanye iXerox.
UJavier Mariscal ngumyili wemizobo waseSpain, odume kakhulu ngokuba ngumyili weMidlalo yeOlimpiki yaseBarcelona ngo-92. Imisebenzi yakhe ibandakanya ukuthengisa, iipowusta, iinoveli zegraphic, oopopayi, icinema ethile, uyilo, ukupakishwa, njl. Ungomnye wawona magcisa abanzi kunye nabayili kuba echukumise iindawo ezahlukeneyo zoyilo. Ikwanexabiso eliphezulu lokudala, ekubeni imisebenzi yakhe ibonakala ngeefonti kunye nezakhi okanye imizekeliso ayisebenzisayo kuyo nganye kuzo. Akumangalisi ukuba naye ungomnye weereferensi ezinkulu zaseSpain, oye wakwazi ukusenza sonke sithandane.
U-Pepe Gimeno ngomnye wabaqulunqi baseSpain abaphumelele ibhaso lokujonga okuphezulu kunye nommeli. Ngokuqinisekileyo uvile ngaye, kuba ungumdali womthi wesundu wabakhenkethi odumileyo oquka icandelo lezokhenketho loLuntu lwaseValencia. Umthi wesundu otshajiweyo ngemibala, nganye kuwo imele inkcubeko, imozulu, imbali kunye nelifa lemveli yenye yezona ndawo zibalaseleyo eSpain.. Ukwaziwa ngoyilo lwakhe oluncinci kunye noyilo lwedemure. Ngamafutshane, umzekelo omkhulu ukuba ngokuncinci ungathetha kakhulu.
Kukho abaqulunqi abaninzi kunye nabayili abaye baba yinxalenye yembali. Phakathi kwabo, uPaul Rand ube yenye yeembekiselo ezinkulu kuthi sonke. Alithandabuzeki elokuba imisebenzi yakhe iye yaphawula ngaphambi nasemva kwayo, nokuba nganye kuzo inentsingiselo kunye nesimbo esiyenza isebenze kwaye ekuqaleni ibe yeyakhe.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi ngalo myili kunye nomzobi ubalaseleyo. Siyakumema ukuba uqhubeke nokukhangela eminye yemisebenzi yakhe, ephantse ibe ngama-250. Phakathi kwazo kukho iimpawu kunye neepowusta. Sikwanethemba lokuba ezinye zeereferensi esizibonisileyo ziya kukukhuthaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iilogo zikaPaul Rand
Indlela yokwenza ipalethi yombala wesiko
Yonke into okufuneka uyazi malunga ne-Avenir typeface